Ku saabsan Minde - Idrettsrådet Stavanger
Waxaanu kiraynaa dhismayaasha dhacdooyinka kala duwan sida magac u bixinta, xaqiijinaha, sanad guurooyinka, aroosyada, dhalashooyinka, xafladaha, koorsooyinka/shirarka, iwm.
Guriga Ciyaaraha Stavanger
Hansons Minde waxaa iska leh Degmadda Stavanger, laakiin hadda maamula Ciyaaraha gudaha Stavanger oo hoostagta Gollaha Ciyaaraha. Dabaqa hoose, waxaa ku yaala xarumaha qolka kullanka kaas oo bilaasha loogu heli karo wixii kooxaha ciyaaraha gudaha Stavenger ah. Dhamaadyada todobaadka sisoo kale waxaanu kiraynaa dhismaha wixii dhacdooyin ah. Dabaqa labbaad, maamulka Gollaha Ciyaaraha waxa uu ku leeyahay xafiisyadiisa. Caadi ahaan waxaan u furanahay xaga guriga dhammaadka todobaadyada u dhexeeya 9:00 subaxnimo 3.30 galabnimo, laakiin waxaad u sii samayn kartaa hore ballan haddii aad doonayso inaad nala kullanto.
Taariikhda Hansons Minde
Hansons Minde waa magaca dhismaha halka Ciyaarah gollaha uu saldhigeedu yahay. Magacu waxa uu ka yimid Bernhard Hanson, oo dhashay 1821, kaas oo ahaa macalinka sawirka dugsiga Kongsgård. Waxa uu iibsaday qayb yar oo ka ah beerta Tjensvold oo waxa uu dhisay guri yar oo dhagax dambari ah kaas oo ka dib si wayn loo ballaadhiyay. Sidoo kale dhisay afar berkadood oo tijaabiyay meesha kalluun dilaacinta arda fiishalka ah. Hanson waxauu dhintay 1883 oo ururintiisa waxyaabaha waayadii hore, alaabta dhaqamadii hore iyo kuraasta iyo miisaska waxaa la siiyay Carwada Stavanger si waafaqsan dardaarankiisii. Laga bilaabo qiimaha halkan, deeqda ayaa loo abuuray faa’iido u ah Carwada Stavanger.
Waxaa jirta qayb taariikh ah, laakiin wax badan ayaa dka akhriyi kartaa oo ku sabasan iyadda halkan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira gol dalooyin, gaar ahaan taariikhda dhow, mamrkaas haddii qof halkaas joogaa garanayo wax badan oo ku saabsan taariikhda dhismaah iyo si la doorbidayo sawirada qaarkood, aad ayaanu u xiisaynaynaa inaan la xidhiidhno.
Intaa ka sakow, may cadayn hadidi Hanson lagu qori lahaa Hanson hal ama laba S. Waxaa jiray dhowr ilo la isku halayn kakro oo aan isku habboonayn, tusaale ahaan, magacu waxa uu leeyahay labba S oo ku yaala dhagaxiisa xabaasha xaga Lagårdsveien, marka kaydkii hore ay ku qoran tahay labbadaba hal iyo labba S. Sidaas awgeed waxaan dooranayn inaan qorno magaca leh labba S.
Laakiin qaraabada, Bernhard Hanson, ayaa yimid oo xaqiijiyay Hanson in lagu qoro hal S.
Xidhiidhkan, waxaan doonaynaa inaan la xidhiidhno dadka haysta sawirada, sawirda Bernhard Hanson laftiisa, guriga iyo/ama sawirkiisa iyo sawirda looxaanta. Waxay ahaan lahayd gaar ahaan cajiib in la qabto sawir wanaagsan oo ninkan midabka wacan ah.